OGEYSIIS: Shirkadda KADIL Technology Inc oo idin keentay adeegyo casri oo qiimo jaban. | Dhacdo
Home Wararka Maanta OGEYSIIS: Shirkadda KADIL Technology Inc oo idin keentay adeegyo casri oo qiimo...
OGEYSIIS: Shirkadda KADIL Technology Inc oo idin keentay adeegyo casri oo qiimo jaban.
Waxaa la ogeysiinayaa, looguna bishaareynayaa bulsho weynta Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan, in Shirkadda KADIL TECHNOLOGY INC ay idin heyso adeegyo casri ah oo kala ah, Web Hosting (Marti-gelin), Domain Name Registrar (Magac Diiwaangelin) iyo Web Designing (Nashqadeen).
Howlaha shirkadda KADIL TECHNOLOGY INC ay idin heyso waxaa ka mid ah, horumarinta iyo sameynta Website-yada nooc kasta ah, kuwaa oo isugu jira, Shakhsi (Personal Website), Ganacsiga (eCommerce), Shirkadaha Duulimaadyada, Cargow-yada, Iskuullada, Jaamacadaha, Goobaha Caafimaadka, Jaaliyadaha Qurbaha, Ururrada Bulshada, iyo kuwa Hay’adaha Maxalliga ah (NGOs)-ka.
Intaas kaliye kuma koobna howlaha iyo Waxqabadka Shirkadda KADIL TECHNOLOGY INC, waxay kaloo bulshada Soomaaliyeed ugu talagashay inay u tababarto howlaha ay u qabato Macaamiisheeda si bilaash ah.
KADIL TECHNOLOGY INC oo ah hoyga marti-gelinta (Keydinta Xogta), horumarinta iyo abuurista Website-yada casriga ah ayaa waxaa kugu diyaar ah Dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku takhasusay cilmiga IT-ga (Information Technology), kuwaasi oo xilli walba diyaar la ah in Afkaada Hooyo kugu qanciyaan howlaha aad u igmato.
Hal-heyska Shirkadda KADIL TECHNOLOGY INC waa Daacadnimo, Karti, Aqoon, shaqo hufan iyo qiimo ku raali-geliya.
Haddaba booqo website-kooda www.kadiltech.com ama kala xiriir ciwaankooda: info@kadiltech.com, iyo Telfoon Numbarrada kala ah,
+252 61 7327291 (WhatsApp) +49 1521 0835321 (WhatsApp)
Maamulaha Guud ee Shirkadda
Eng. Abdifatah Hassan Adde.
Kadil Technology Inc
Previous articleShabaab oo lagu jebiyay weerar culus oo saaka ku qaadeen Baxdo
Next articleMacluumaad la xiriira Shirka Golaha Wadatashiga oo dib uga bilowday Muqdisho